Reactive & Proactive Management — Balance Professional Services
Reactive & Proactive Management
စီမံခန့်ခွဲမှုပုံစံ (၂) မျိုးအကြောင်း
လုပ်ငန်းရှင်တိုင်း၊ Manager တိုင်းသိထားသင့်တဲ့ စီမံခန့်ခွဲမှုပုံစံ (၂) မျိုး
တော်တော်များများလုပ်ငန်းရှင်တွေ၊ Manager တွေသိထားတာက သူတို့ရဲ့တာဝန်က ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ ပြဿနာတွေကို ဖြေရှင်းနိုင်ဖို့ ဆိုတာပါဘဲ။ ဒါကလည်း မမှန်တာတော့ မဟုတ်ပါဘူး၊ ဒါပေမဲ့ ဒီထက်ပိုတဲ့တာဝန်တွေ သူတို့ဆီမှာ ရှိပါသေးတယ်။ အဲ့တာဝန်ကတော့ ဖြစ်လာနိုင်တဲ့ ပြဿနာတွေကို ကြိုတင်ခန့်မှန်းပြီး ကာကွယ်တာပါဘဲ။ ဆိုရိုးစကားလေးတောင် ရှိပါသေးတယ် “ကြိုတင်ကာကွယ်ခြင်းက ကုသခြင်းထက်ကောင်းတယ်”။
အခုဆောင်းပါးမှာတော့ Reactive Management (ပေါ်လာတဲ့ ပြဿနာတွေကို စီမံဖြေရှင်းခြင်း) နဲ့ Predictive Management (မဖြစ်သေးခင် ပြဿနာတွေကို ကြိုတင်စီမံကာကွယ်ခြင်း) တို့နှစ်ခုရဲ့ခြားနားချက်တွေကို ရှင်းပြသွားမှာပါ။
Reactive Management (ပြဿနာများကို ဖြစ်ပေါ်လာမှ စီမံခန့်ခွဲခြင်း/ ဖြေရှင်းခြင်း)
Reactive Management ဆိုတာက ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ပြဿနာတွေ၊ ဖြစ်နေတဲ့ ပြဿနာတွေကို အကောင်းဆုံးနဲ့ အမြန်ဆုံး ဖြေရှင်းပေးတာ/ စီမံခန့်ခွဲပေးတာကို ပြောတာပါ။ အဲ့လိုဖြေရှင်းပေးနိုင်ဖို့ ဘယ်လိုအရည်အချင်းတွေကို လိုအပ်သလဲဆိုတော့
• ဆုံးဖြတ်ချက်တွေကို တတ်နိုင်သမျှ မှန်မှန်နဲ့မြန်မြန် ချမှတ်နိုင်ခြင်း
• ပြဿနာရဲ့အရင်းအမြစ်ကို ရှာဖွေနိုင်ခြင်း
• ဖန်တီးနိုင်မှုစွမ်းအားကောင်းပြီး ပြဿနာအသစ်များအတွက် အဖြေအသစ်များ ထုတ်ပေးနိုင်ခြင်း
• ခက်ခဲသော ပြဿနာတွေအတွက် ပိုမိုလွယ်ကူသောနည်းလမ်းတွေ ရှာဖွေနိုင်စွမ်းရှိခြင်း
• အကြပ်အတည်းတွေ၊ ပြဿနာတွေကို အကောင်းဆုံးတည်တည်ငြိမ်ငြိမ် နှင့် ထိန်းချုပ်နိုင်စွမ်း
Reactive Management ကောင်းတဲ့ သူတယောက်က ပြဿနာတစ်ခုပေါ်လာတဲ့အခါ တွေဝေခြင်း၊ မိန်းမောခြင်းမရှိဘဲ တည်တည်ငြိမ်ငြိမ် နဲ့ ပြဿနာတွေကို ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာပြီး အရင်းအမြစ်ကို ရှာဖွေနိုင်ပါတယ်။ ပြဿနာကိုကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းရာမှာလည်း ရှိပြီးသားအဖြေတွေထက်ကောင်းတဲ့ ဖြေရှင်းနည်းတွေကိုပါ တီထွင်ကြံဆပေးနိုင်ပါတယ်။ ဒီအရည်အချင်းဟာ လုပ်ငန်းရှင်၊ မန်နေဂျာတစ်ယောက်အတွက် မရှိမဖြစ်လိုအပ်တဲ့ အရာတစ်ခုပါ။ ပြဿနာတွေကို ပေါ်လာတာနဲ့တစ်ပြိုင်နက် ဖြေရှင်းခြင်းအားဖြင့် လုပ်ငန်းကိုအမြန်ဆုံးချောချောမွေ့မွေ့ ပြန်လည် လည်ပတ်နိုင်စေပါတယ်။
ဥပမာ - စက်ပစ္စည်းချို့ယွင်းသွားရင် ဘယ်အပိုင်းကလည်း ဘာလို့ပျက်သွားတာလဲ၊ အမြန်ဆုံး ဘယ်လိုပြန်ကောင်းအောင်လုပ်မလဲ၊ ချို့ယွင်းသွားတဲ့ ပစ္စည်းအရ အသစ်လဲမှာလား၊ ပြန်ပီးပြင်ထည့်မှာလား? ပြန်လည် လည်ပတ်ဖို့အတွက် အချိန်ဘယ်လောက်ကြာနိုင်မလဲ၊ ဆုံးရှုံးမှုတွေဘယ်လောက်ရှိနိုင်မလဲ? အစရှိတာတွေ တွေးပြီးတော့ အဲဒါတွေကို အချိန်တိုတိုနဲ့ အကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်ဖြေရှင်းနိုင်ရပါမယ်။ ဒါပေမယ့် တစ်ခါတစ်ရံမှာ ဖြစ်လာတဲ့ ပြဿနာတွေကို ဖြေရှင်းပေးနိုင်ယုံတင်မလုံလောက်ပါဘူး၊ ဖြစ်လာနိုင်မယ့် ပြဿနာတွေကိုလည်း ကြိုတင်ကာကွယ်နိုင်တဲ့ အရည်အချင်းတစ်ခုလည်း ပိုင်ဆိုင်ထားရပါမယ်။
Predictive Management ( ဖြစ်လာနိုင်သော ပြဿနာများကို ကြိုတင်ခန့်မှန်းခြင်း၊ ကာကွယ်ခြင်း)
Predictive Management ဆိုတာက ဖြစ်လာနိုင်တဲ့ ပြဿနာတွေကို မဖြစ်ခင်ကတည်းက ကြိုတင်ပြီး စီမံကာကွယ်တာဖြစ်ပါတယ်။ Predictive management နဲ့ ပြဿနာတွေကိုပိုပြီး ကာကွယ်နိုင်လေလေ Reactive Management နဲ့ ပြဿနာတွေ ဖြေရှင်းရတာနည်းလေလေဖြစ်ပါတယ်။ Predictive Management ကောင်းဖို့အတွက် ဘယ်လိုအရည်အချင်းတွေ လိုအပ်သလဲဆိုတော့
• ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာနိုင်ပြီး တွေးတောမြင်တတ်ခြင်း
• အရေးကြီးတာနဲ့ မကြီးတာကို ခွဲခြမ်းသိနိုင်ခြင်း
• ဖြစ်တတ်တဲ့ ပြဿနာတွေ၊ အမှားတွေကို မြင်တတ်ခြင်း၊ သတ်မှတ်နိုင်ခြင်း
• ပြဿနာတစ်ခုဖြစ်လာမှ ဘယ်လိုဖြေရှင်းမယ်ဆိုတာထက် ဘာလို့ဖြစ်လာတာလဲ၊ ဘယ်လိုကာကွယ်နိုင်ရမလဲ ဆိုတာကို တွေးနိုင်ခြင်း
Predictive Management ကောင်းတဲ့သူတယောက်က ပြဿနာတစ်ခုကို ဖြစ်ပေါ်စေနိုင်တဲ့ အခြေအနေတွေကို ခွဲခြမ်းသတ်မှတ်ပြီး ပြဿနာတွေတကယ်ဖြစ်မလာအောင် လျှော့ကျသွားအောင်လုပ်ပေးနိုင်ပါတယ်။
ဥပမာပြောပြရရင်တော့ဗျာ - ခုနကစက်ယန္တရားလုပ်ငန်းမှာဆို စက်တွေခနခန ပျက်တတ်တယ်၊ Accident တွေဖြစ်တတ်တယ်ဆိုရင် ဖြစ်ရတဲ့ပြဿနာအရင်းအမြစ်ကို ရှာဖွေရပါမယ်။ စက်တွေပျက်တာက သုံးတဲ့ဆီတွေ မသန့်လို့လား? Maintainance တွေမကောင်းလို့လား? ပြင်ထားပြီးသားစက်ပစ္စည်းတွေ ဆိုရင်ပြင်တဲ့သူရဲ့ ပေါ့ဆမှုကြောင့်လား။ အသစ်လဲထားတဲ့ စက်ပစ္စည်းတွေဆိုရင် Quality မကောင်းလို့လား။ Accident တွေဖြစ်ရတာ လူကြောင့်လား၊စက်ယန္တရားကြောင့်လား စတဲ့ ပြဿနာတွေရဲ့ အရင်း အမြစ်ကို ရှာဖွေရပါမယ်။ ပြီးတော့ပုံမှန်ဆိုရင် ဘယ်ပစ္စည်းကပျက်တတ်တယ်။ဘယ်စက်ကပျက်တတ် စတဲ့ဖြစ်နေကျ ပြဿနာတွေကိုလည်း ဖြေရှင်းတက်ဖို့ ကြိုတင်ပြင်ဆင်ထားရပါမယ်။
Predictive Management ကတော့ လုပ်ငန်းရှင်တိုင်း၊ Manager တိုင်း အတွက် အရေးကြီးပါတယ်။ Predictive Management ကောင်းရင် Reactive Management လုံးဝသုံးစရာ မလိုတော့တာ မဟုတ်ပေမဲ့ အသုံးပြုရတာ လျှော့နည်းသွားစေမှာပါ။
ဒါဆို Predictive Management ကောင်းအောင်ဘယ်လိုလုပ်ကြမလဲ?
Predictive Management ကောင်းဖို့အတွက် ဘာတွေလုပ်ဖို့ လိုအပ်သလဲဆိုတော့ အကောင်းဆုံး ကတော့ အတွေ့အကြုံကနေတစ်ဆင့် သတိရှိရှိနဲ့ လေ့ကျင့်သင်ယူတာပါပဲ။ နေ့စဉ်နေ့တိုင်း အချိန်ခဏလောက်ပေးပြီး အပေါ်မှာဖော်ပြခဲ့တဲ့ အရည်အသွေးတွေ တိုးတက်လာ အောင်လေ့ကျင့်ပါ။ အောက်မှာတော့ ဘယ်လိုတွေးရမယ်၊လေ့ကျင့်သင့်တယ်ဆိုတဲ့ဟာကို နည်းလမ်းအနည်းငယ် ဖော်ပြ ပြပေးလိုက်ပါတယ်။
ကိုယ့်အတွက် (သို့မဟုတ်) ကိုယ့်လုပ်ငန်းအတွက် ခေါင်းအခဲရဆုံးပြဿနာ တစ်ခုကို စပြီးတွေးပါ။
• နောက်ဆုံး ဘယ်အချိန်က ဖြစ်သွားတာလဲ?
• ဘာတွေကြောင့် ဖြစ်ရတာလဲ?
• မဖြစ်ခင် ဘယ်လို သတိပေးချက်တွေ၊ အခြေအနေတွေ ရှိသလဲ?
• အရင်က ဘယ်လိုဖြေရှင်းခဲ့သလဲ?
• ဖြေရှင်းလိုက်တဲ့ နည်းလမ်းက ကိုယ့်ဘယ်လောက်ရင်းနှီးစိုက်ထုတ်လိုက်ရသလဲ
• ပြဿနာတွေထပ်ပြီး မဖြစ်လာအောင် ဘယ်လို ကာကွယ်နိုင်မလဲ?
• နောက် ထပ်မဖြစ်လာအောင် (သို့မဟုတ်) ခဏခဏ မဖြစ်လာအောင် အခုဘာလုပ်လို့ရနိုင်မလဲ?
အပေါ်က မေးခွန်းတွေကို တွေးပြီး ရလာတဲ့ အဖြေတွေကို မှတ်ထားပါ။
သတိပေးချက်တွေ၊ အခြေအနေတွေ ပေါ်လာတာနဲ့ ပြဿနာ မကြီးလာခင် အကောင်းဆုံးဖြေရှင်းပါ။
Predictive Management ကလေ့ကျင့်တာနဲ့အမျှ ပိုပြီးကောင်းလာနိုင်ပါတယ်။ Reactive Management က လိုအပ်တာမှန်ပေမယ့် အရင်ကလောက်လိုမှာ မဟုတ်တော့ပါဘူး။
Business AdviceHtet Khaing Hla Soe November 7, 2018 Business Management
Business AdviceHtet Khaing Hla Soe November 7, 2018 Business Advice, Business Survival